Singapore - Yangon izay notompoin'i SilkAir ankehitriny
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Singapore - Yangon izay notompoin'i SilkAir ankehitriny
SilkAir, elatra isam-paritry ny Singapore Airlines, dia handray serivisy dimy heny isan-kerinandro any Yangon, Myanmar, izay tantanan'ny Scoot, sampana ambany vidy amin'ny SIA Group, manomboka ny 29 Oktobra 2017.
SilkAir dia efa miasa sidina tsy miato 10 isan-kerinandro mankany Yangon ary serivisy telo isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny Mandalay any Myanmar. Amin'ny famindrana ny serivisy Scoot's Yangon, ny SilkAir dia hampisondrotra ny asany Yangon ho serivisy tsy an-kiato 15 isan-kerinandro. Ny orinasan-dray aman-dreny Singapore Airlines dia miasa ihany koa amin'ny Yangon.
Ireo vahiny manana famandrihana efa misy momba ny serivisy Scoot's Yangon ary aorian'ny 29 Oktobra 2017 dia horaisina indray ao amin'ny SilkAir. Handray antsipiriany momba ny famandrihany vaovao amin'ny alàlan'ny mailaka izy ireo rehefa vita ny trano hipetrahana. Ireo vahiny izay maniry ny hanafoana ny famandrihany dia afaka misafidy ny hamerina amin'ny laoniny ny tapakilan'izy ireo. Ny vahiny Scoot izay mila fanampiana dia afaka mifandray amin'ny foibe fiantsoana Scoot.
"Ny famindrana ireo serivisy Scoot's Yangon mankany SilkAir dia hanatsara ny fampiasana fiaramanidina ao anatin'ny Singapore Airlines Group ary hanafoana ny loharanom-bolan'ny Scoot ho an'ny drafitra fampandrosoana ny tambajotra hafa," hoy Andriamatoa Lee Lik Hsin, tale jeneralin'ny Scoot.
"Manantena izahay ny hanome ny zotram-piaramanidina fandefasana sidina fanampiny mankany Yangon, feno ny traikefanay amin'ny serivisy feno, ao anatin'izany ny vola fanampiana amin'ny enta-mavesatra, ny sakafo misimisy ary ny fialamboly inflight amin'ny alàlan'ny SilkAir Studio anay," hoy Andriamatoa Foo Chai Woo, Chief Executive SilkAir.
Amin'ity famindrana ity dia tsy hiasa any Myanmar intsony ny Scoot ary ny tambajotran-dry zareo dia hiitatra toerana 60 manerana ny firenena 16 avy eo. Scoot dia nanambara mialoha fa hanomboka serivisy voatondro ho any Kuching ny 29 oktobra 2017, Honolulu ny 19 desambra 2017 ary Kuantan ny 2 febla 2018. Scoot koa dia hampiakatra sidina fizaran-taona mankany Harbin manomboka ny 1 desambra 2017, ary hanampy Singapore tsy miato Singapore -Sidina Sapporo (ankoatry ny sidina Singapore-Taipei-Sapporo mandritra ny taona) manomboka amin'ny 3 Novambra 2017.
Qatar Airways dia manitatra serivisy fisakafoanana mialoha voafantina
IATA: fampiakarana mihoatra ny 7% amin'ny dia an-habakabaka raha ampitahaina tamin'ny taon-dasa